Ity farany moa dia napetraky ny lalàna izay nolaniana tao amin’ny antenimieram-pirenena tamin’ny taona 2017. Tamin’izany no nanekena fa ny 1%-n’ny vata-karama no latsakemboka arotsaky ny mpampiasa amin’ny sehatra tsy miankina ao amin’ny kitapom-bola iombonana. Arak’izany dia volan’ny sehatra tsy miankina ary tantanin’izy ireo ihany izany ka hanomboka ny janoary 2019 ny fandoavana voalohany ny latsakemboka. Na izany aza dia hanampy amin’ny fitantanana io vola io ny Masoivoho Frantsay ho an’ny fampandrosoana (AFD) mandritra ny 3 taona satria misy vola 6 tapitrisa Euro na 24 114 900 000 Ariary (1Euro=4019,15 Ariary) narotsany hoenti-manainga ny kitapo iombonana. Nanambara ny minisitra Rahantasoa Aimée Lydia fa 70%-n’io vola arotsaka ao amin’ny kitapo iombonana io dia miverina amin’ny fampiofanana ny mpiasa eo anivon’ny orinasa mpikambana amin’ny sehatra voafaritra tsara. 20% no hoentina amin’ny sehatra hafa ary ny 10% kosa no hampiasaina amin’ny fitantanana ankapobeny.